विमान होल्ड काण्ड : संचारमन्त्री काण्डपछि संस्कृति मन्त्रीले किन नचेतेको ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 05:42:03
जापानी समय : 08:57:03
15 September, 2019 13:49 | राजनीति | comments | 11700 Views
शनिबार साँझ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई धनगढी हुँदै नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आउने क्रममा विमान रोकियो । नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट काठमाडौंका लागि उड्नै लागेको बुद्ध एयरको जहाज एक घण्टा रोकेपछि यात्रुहरुले विमानभित्रै मन्त्री भट्टराईबिरुद्ध आवाज उठाए ।
यस्तै भएको थियो केही महिना अघि संचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबाट । उहाँले काठमाडौं फर्कने क्रममा बुद्ध एयरकै जहाज रोक्न लगाउनुभएको थियो । यो प्रकरपछि भट्टराईले पाठ नसिकेर पुनः जहाज रोक्न लगाउनुभयो । यात्रुहरु आक्रोशित थिए । त्यही जहाजमा थिए नागरिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही पनि । मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि उडान होल्ड गरेको र सोही कारण एक घण्टा ढिला भएको भन्दै यात्रुहरूले मन्त्रीविरूद्ध जहाजमै नाराबाजी गरेका हुन्।
उनीहरुले तपाईंप्रति हाम्रो विश्वास थियो । प्रधानमन्त्री आउँदा पनि हामीले नै दुःख पाउने । आश गरिएका युवा मन्त्री आउँदा पनि हामीले नै सास्ती पाउने । यो कस्तो व्यवस्था हो भन्दै मन्त्रीसमक्ष बोलेका भिडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री भट्टराईले स्पष्टिकरण दिंदै आफ्नो कारणले यात्रुहरुलाई असुविधा परेकोमा क्षमा माग्नुभएको छ ।
पर्यटन मन्त्री भट्टराई शनिबार डल्फिन महोत्सवको उदघाटन गर्न कैलालीको धनगढी हुँदै टीकापुर पुग्नुभएको थियो । कार्यक्रम सकेपछि शनिबार साँझ उहाँ नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट बुद्ध एयरमा काठमाडौं फर्किनसभएको हो । कार्यक्रम सकेर नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आइपुग्दा प्लेन छुट्ने समय केही ढीलो भएको थियो । तर, एक घण्टासम्म नभई १५ मिनेटमात्र ढीलो भएको मन्त्री भट्टराईका स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईको दाबी छ । तर विमानका यात्रु भने एक घण्टा कुराएको भनिरहेका छन् ।
प्रश्न कुरेको र कुराएको हेन, नैतिकताको हो भन्नेहरु धेरै छन् । सरकारका कतिपय कामहरु विवादित बनिरहेका बेला यात्रुहरुलाई कुराएर आफ्नो सवारी चलाउनु मन्त्रीका लागि सानको विषय बन्न सक्दैन । यसको साटो अर्को विकल्प खोज्न सक्नुपथ्र्यो । विदेशमा कुनै मन्त्रीका कारण उडान ढिलाए भए मन्त्रीले क्षमा माग्दै राजीनामा दिएका घटना पनि सबैले पढेकै हो । मन्त्रीहरुले आफ्नो मर्यादा कायम राख्ने हो शक्ति प्रदर्शन गर्ने हैन ।
मन्त्रीले विमान रोकेपछि बिरोध गर्नेहरु राजावादी भएको आरोप लगाउँदै घटना सामान्य भएको टिप्पणी गरे । सत्तापक्षका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु मन्त्रीको बचाउमा लागे । उनीहरु भिडियो खिच्ने र मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नेमाथि सामाजिक संजालबाट जाइलागे । के यस्तो आवश्यक थियो ? यो राजनीतिक संस्कार हो ? मन्त्रीले जेजस्तो भए पनि आफ्ना कारणले यात्रुलाई मर्का परेको भन्दै क्षमा माग्नु राम्रो कुरा हो तर उहाँले पनि राजावादीहरुले बिरोध गरेको भन्नु सुहाएन कि ? यस्तो संस्काले हामी सबैलाई कतै पुयाउँदैन झनझन भास्दै लान्छ ।